Saka, iwe pakupedzisira unoenda kutora nguva iyo yakamirira kwenguva yakareba neyakakosha. Asi haisi nguva dzose waini nemirasi kana vaviri vakasarudza kugunzira mumugwagwa pamwechete. Imwe nguva yezororo inogona kuva ruzivo rwakakura, maererano nezvakaitika iwe pachako uye hutano hwehukama hwako. Kune rumwe rutivi, mazororo anogonawo kutungamirira kune ukama hwehukama. Hekukupa mutungamiri pa Nzira Yokuita Kuti Sororo Yako Ive Nezvimwe Zvikuru Zvisingakanganwiki.
Yeuka Rwendo Rwakave Ruri Mwero
Pamusoro pekugadzirira kunogona kuwedzera kuomeswa kusingakoshi kune rwendo. Funga nezvekutsvaga rwendo urwu kana iwe uchinzwa sewe unonetseka kupfuura kufara. Pasinei nokuti kunonoka kwechitima kana mamiriro okunze akaipa, dzidza kuchinja seboka. Yeuka kufara nguva yako pamwechete. Kupedza vhiki yevhiki pamwe chete kunogona kuva muedzo wakakwana kuti uone kana imi vaviri muri shamwari dzakanaka. Iwe unogona kutora rwendo rurefu mumatanda pedyo neguta rako kana kutsvaga mamwe maguta ari pedyo newe. Izvozvo zvinofanira kukuratidza kuti iwe nemumwe wako muchagadzirisa sei mune zvitsva.
2. Nguva dzose Sarudza Nzvimbo dzeMutano Wechido
Iwe uri nharo yezvakaitika kare uye unoda kukwira zuva rese here? Dzimwe nguva panguva yekuronga zvakaoma kusvika pakusarudza. Somunhu mumwe nomumwe, isu tose tine pfungwa dzedu uye dzimwe nguva zvakaoma kubvuma kwete. Nyika inzvimbo huru uye kusarudza nyika imwe yekutsvaga inogona kuva yakaoma naizvozvo, gara uchisarudza kuti chii chaungada kuita panguva dzezororo rako. Ita runyora rwemaunzvimbo waunoshanyira, taurira bhee yako kuti inyore yake & ienzanise kuti ione vamwe iwe unoda kuongorora. Sezviri nyore seyo.
3. Siya Mhosva Yenyu Miti Pamba!
Unozviziva. Anozviziva. Isu tose tinozviziva! Pane imwe nguva kusabvumirana kunoitika, kuguma kwezororo rakanaka kunyange iwe uri mune imwe nzvimbo inodhura yakawandisa nemaruva & zviedza zvechikafu zvakakupoteredza. Kuenzanisira kuti ndiani ari kukodzera, asina kururama, kana kuti iwe iwe vaviri sei kunyange wakapinda mumatambudziko munzvimbo yekutanga hazvibatsiri uye kuparadza kwemazuva. Zvose zvinokosha ndekuwana mhinduro padambudziko - izvo zvinongoitika chete nekuuya pamwe chete uye kwete kureva zvigunwe.
4. Sarudza Mari Yenyu Yemajeri Kare kare
Sarudza kuti uchatora mari yakawanda sei. Uri kuenda kuparadzanisa bhajeti here kana mumwe munhu achangopedza zvishoma? Wakanaka here? Iyi ndiyo mibvunzo yaunoda kuzvibvunza nayo yako inokosha, imwe nzira isati yasvika uye inofanira kuitwa nenzira yakarongeka. Zvichida mutsauko muhupfumi kune umwe neumwe wenyu mukuru zvokuti umwe wenyu anoda kubhadhara zvezororo rose. Kana zvakadaro ndizvo zvinozoti mumwe wacho ataure kana akaine izvozvi. Chero mamiriro ose ezvinhu, sarudza bhajeti yezuva rega yewendo rwako kuitira kuti hapana mumwe wenyu anogona kushandisa zvakawanda kupfuura iwe.
Vamwe vedu tinowanzotakura zvinhu zvakawanda kupfuura zvatinoda & izvo zvichava guru guru murwendo rwenyu. Iwe haugoni kufara rwendo urwu rwakakwana kana musana wako uchikuvadza kubva pakutakura mutoro wakawedzerwa. Uye kunyange zvakanyanya, iwe wakatakura zvakawanda zvokuti haugoni kutakura bhegi rako uye kupa bhae yako kuti itakure. Iye zvino ari kutakura bhegi rake uye musaga wako haana kukumbira! Apo iwe uri kutakura unotora chete zvinhu zvaunenge uchida uye izvo zvisingakwanisi kutenga paunenge uchienda kwauri kuenda. Usatakura chimwe chinhu chausingakwanisi kutakura mushure mako kwezuva rose. Nenzira iyo hapana maoko evanhu uye kumashure ari kukuvadza.
6. Iva Wakagadzirira Kuona Unhu Hweusingazivikanwe Womudiwa Wako
Uchapedza maawa e24 nemumwe wako uye izvo zvichakupa kunzwisisa kwezvaanoda uye zvisingadi. Kupedza nguva yakakura pamwe chete kuchaita kuti muwane mukana wekuzivana. Paunenge uinaye nguva dzose iwe unogona kuwana hupenyu hwake hwechokwadi, uye izvozvo zvinogona kuva zvinotyisa. Angave ane dzimwe tsika kana mufambiro wausingazivi nezvazvo, uye zvose zvingangoonekwa kana iwe uri pamwe 24 / 7. Izvi zvinoshanda kwauriwo zvakare. Achave aripo kana iwe uchirasikirwa nekunaya kwako, izvo zvinogona kutungamirira kune zvakaitika zvinotyisa. Zvisinei, kudzidza pamusoro peumwe kunogona kuita kuti iwe uswedere pedyo, uye iwe unogona kutowana zvimwe zvezviito zvake zvakanakisisa.
7. Tora Hanya Neumwe neumwe
Kunyangwe iwe iwe varume muchikakavadzana, kana achizora tsoka dzako mushure mezuva refu, musikana, iye muchengeti! Iwe unofanirwa kutarisirana. Iwe haufariri here apo iye anoponesa chikamu chekupedzisira che pizza apo iwe wakabatikana nechimwe chinhu? Dzorera kutarisira ne rudo rukuru & rudo. Zvinonyanya kukosha kutendera mumwe nomumwe kutarisirana, usaedza kuva mukadzi akasindimara uye akazvimirira kana iwe usingagoni kuita chimwe chinhu iwe pachako. Rega akubatsire, uye mumubatsire kana iwe uchifunga kuti iwe unofanira kuzviita.